Dabaqoodhiyo Asalkooda Kasoo jeeda Soomaalida ee Itoobiya Gumaysato oo dagaal lagu dilay! | kowtharmedia.com
Home WARAR Dabaqoodhiyo Asalkooda Kasoo jeeda Soomaalida ee Itoobiya Gumaysato oo dagaal lagu dilay!
Dabaqoodhiyo Asalkooda Kasoo jeeda Soomaalida ee Itoobiya Gumaysato oo dagaal lagu dilay!
Feb 15, 2017WARAR
Dagaal goos goos ah ayaa waxa uu ka socdaa Gudaha Dalka Itoobiya waxa uuna Dagaalka uu dhaxeeya Qomiyaha lagumaysto iyo Qoomiyada Tigrayga oo ah Qomiyada gumaysata Qomiyadahaas, waxaana Cabdi iley oo ah Cabtooy uu dagaal galiay Liyuupolice. Sawirkani waa Sawirka Saraakiisha Kamid ah Ciidanka Wayaanaha ee Dagaal galinaya kooxda Maanlaawa yaasha ah ee tigraygu xabada isaga dhigto ee Liyuu boolis kuwaasi oo dagaal gar daro ah ku hayo shacabka aan dariska nahay ee Oromiya.
ID-gan waxaa laga helay bakhtigii ciidanka gumaysiga ee lagu laayay dagaalka laga dhex hurin hayo Maleeshiyaadka Oromada iyo kuwaan Maanlaawe yaasha ah ee Liyuu bolis.
Dagaalka uu tigraygu dabada ka wada maahan mid ka turjumaaya rabitaan shacabka.
Wakhtigaan lagu jiro shacabka Ogadeniya Diyaar uma ahan inuu dagaal la galo walaalaha Oromiya oo Sida Qabiilada Isaaq, Ow-xasan iyo Ogaaden oo kale gumaysigu loogu xasuuqo gudaha dhulka loo baxshay itoobiya.
Wakhtigan lagu jiro waxaan u baanahay inaan gacmaha iska qabsano dhamaan mucaaradka Itoobiya dagaalkana aan saf balaadhan kaga dhigno kooxda Tplf.
Xigasho Wariye Faysal Duco Qabe
Previous Post10-Caqabad Oo Farmaajo Ka Hortaagan In Uu Noqdo Madaxweynahii Loo Baahnaa (Farmaajo hala gaarsiiyo) Next PostMUUQAAL: Warbaahinta Carabta oo Kashiftay Sababta Imaaraadku u Kiraystay Saldhiga Berbera iyo duulaanka Yemen!